प्रधानमन्त्रीले किन गर्दैछन देशवासीका नाममा सम्बोधन ? « Postpati – News For All
प्रधानमन्त्रीले किन गर्दैछन देशवासीका नाममा सम्बोधन ?
चैत २५, काठमाडौँ । सरकारले लकडाउन (बन्दाबन्दी) वैशाख ३ गतेसम्म लम्ब्याएको छ। चैत ११ गतेयता जारी लकडाउन मंगलबार सकिँदै गर्दा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः आठ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै सदनका चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। हिउँदे अधिवेशन जारी रहे पनि चैत ७ यता बैठक बस्न सकेको थिएन। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सूचना टाँस गर्दै बैठकको मिति सारिँदै आएको थियो। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।